U qor "WIC" 96859
Faa'iidooyin U Qalma - Shaygan waa WIC la ansixiyay, laakiin adiga laguma qorin sheygan ama ma lihid faa'iidooyin kugu filan oo aad ku iibsato sheyga.
Lama ogaan karo - Tani waxay ka dhigan tahay in barnaamijka uusan akhrin karin barcode-ka. Halkii aad iskaan iska dhigi lahayd, waxaad isticmaali kartaa badhanka "Key Enter UPC" si aad u gasho lambarka 12-lambar UPC ee ku hoos yaal qaanadda cuntada.
A: WIC waxay oggolaataa inta badan miraha iyo khudradda cusub. Midho kasta oo khudradda iyo khudradda ah waxay leeyihiin koodh u gaar ah oo maxalli ah. Shuruucdani isku mid maaha dukaamada oo dhan. Sababtaas awgeed, appku ma aqoonsana dhammaan miraha iyo khudradda. Waqti kasta oo app-ka uusan aqoonsan shay, wuxuu iskaan doonaa sida “Ma aha shey WIC ah ”. Adeegso Cunnooyinka WIC ee loo ogolaan karo batoonka app-ka ee ku saabsan su'aalaha ku saabsan alaabada soosaarka la oggol yahay
Faahfaahinta alaabta - Tusaale ahaan, Darigold lactose lacag la'aan ah 1% caano
Cabbirka baakadka cuntada - Tirada wiqiyadaha ama hadday ku jiraan rubuc, gallon, iwm.